Momba anay - Hebei Haorui International Trading Co., Ltd.
Momba an'i HAORUI
Manokana, Fahamarinana, kalitao, serivisy, fanavaozana, Hebei Haorui dia nifikitra tamina filozofian'ny orinasa ankapobeny hatramin'ny nananganana azy. Ny mpiasa rehetra dia manokana fotoana sy hery lehibe hamaliana ny filan'ny tsena, ny HAORUI dia manolo-tena hanome entana sy entana an-trano sy any ivelany ary vahaolana ho an'ny mpividy any ivelany.
Manakaiky ny 20 taona, HAORUI dia mitazona fiaraha-miasa maharitra amin'ny fivarotam-barotra lehibe any Eropa. Miasa miaraka amin'ireo milina voafantina sy voadinika ho an'ny ambaratonga mba hanomezana antoka ny mpanjifa amin'ny vidiny ambany.Entana amin'ny fandroana, vokatra ara-panatanjahantena & fahasalamana, Kilalao hazo.
Enina fitantanan-draharaha fitantanana
Sampana R&D teknika
Miezaha miasa mavitrika amin'ny sehatra mifandraika amin'ny fandaminana ny mombamomba ny vokatra. ary vaovao avy amin'ny izao tontolo izao.Manaova fanavaozana amin'ny asa sy ny endrika isan-karazany mifototra amin'ny tena tinian'ny mpanjifa tsirairay.
Sampana varotra sy serivisy voaofana tsara
Mifantoka amin'ny famokarana fikosoham-bary, fitantanana rojo mpamatsy, fitantanana ny vidiny. Ampiasao ny dingana rehetra amin'ny baiko iray manontolo manomboka amin'ny fangatahana ka hatramin'ny famoahana kaontenera. Manolora serivisy feno sy voafaritra ho an'ny mpanjifa.
Sampana fitantanana kalitao manokana
Diniho sy arahi-maso ny fizotry ny famokarana manontolo, ampio ny sampana fivarotana ary manamboatra momba ny fanaraha-maso sy ny fanatsarana ny teknika. Alao antoka fa ny entana aterina amin'ny toe-javatra tsara indrindra.
Ny mari-pankasitrahana dia mitantana ny departemanta
Mampiasà mari-pankasitrahana azo alaina avy amin'ny marika marika ivelany, mandamina fanandramana amin'ny SGS, TUV, BV, Hohenstein, Intertek ary laboratoara an'ny antoko fahatelo. Manome mari-pahaizana momba ny angona momba ny fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana.
Sampana fitantanana lojika
Tantano ny mpandefa entana, miandraikitra ny fizotry ny entana. Manome serivisy ho an'ny antoko fahatelo ho an'ny mpividy any ivelany.
Sampana serivisy aorian'ny fivarotana
Manangona valiny avy amin'ny makets, manolora fanampiana momba ny fampiasana vokatra sy ny torolàlana momba ny fikojakojana. Mifanaraka amin'ny fitarainana sy ny vahaolana.
Miaraka amin'ny ekipa firehetam-po sy famoronana lehibe, HAORUI no safidinao voalohany amin'ny fametrahana ny baiko!